Alahlwayo Ihhotela & Muhle Imikhiqizo Machine
Ukotini Puff & Golve Ukwenza Machine
Alahlwayo Imikhiqizo Yokuhlinzwa
Umshini Wemaski Ogoqekayo
2D amaseviyethi Imaski Ukwenza Machine
Okuzenzakalelayo amaseviyethi imaski Ukwenza Machine
Umshini we-3D Mask
Okuzenzakalelayo 3D imaski Ukwenza Machine
Okunye amaseviyethi imaski zokushisela Machine
Umshini Wobuso Bezokwelapha
Ngaphakathi Kwe-Earloop Mask Welding Machine
Ngaphandle Kwe-Earloop Mask Welding Machine
Bopha Up Imaski Ukwenza Machine
Okunye Non Nokwelukiweyo Imikhiqizo Machine
Imaski Impahla Machine
Nonwoven Bag Ukwenza Machine
Umshini we-Cup mask noma umugqa wokukhiqiza imaski? Ngemuva kokufunda le ndatshana, ngeke ngidideke!
Njengoba abantu abaningi besebenzisa amaski phesheya, isidingo samaski siyanda, futhi abantu abehlukene banezimfuno ezahlukahlukene zamaski. Lesi sidingo siyimpendulo kubakhiqizi bemishini yethu, ngakho-ke kudingeka sithuthukise futhi sikhiqize izinhlobo ezahlukahlukene zemishini yobuso ukuhlangabezana nezidingo zemask ...
Uyini umehluko phakathi kwamamaski we-N95 ne-KF94?
Umehluko phakathi kwamaski e-N95 ne-KF94 mincane ngenxa yezici abasebenzisi abaningi abazikhathalelayo. I-KF94 yizinga le- "Korea filter" elifana nesilinganiso se-US N95 mask. Umehluko Phakathi Kamaski Ka-N95 Nama-KF94: Ahlukanisiwe Abukeka ...
20 Ubuchwepheshe Bokwakha Umshini Wemaski China Speed ​​Speed ​​Production UP
Ukusuka ekwamukeleni iminikelo evela emazweni amaningi ukunikela ngezinto zokwelapha kwamanye amazwe. Esikhathini esifushane esingaphezu kwenyanga eyodwa, "okukodwa kokukodwa" kwamaski waseChina kukhombisa amandla amakhulu enziwe eChina futhi kuvuselela ijubane elisha lezinto zokwelapha ...